हर्ट अट्याक किन हुन्छ ? यी हुन् हर्टअट्याक हुने पाँच कारण — Ratopost.com News from Nepal
एजेन्सी, ९ मंसिर । आजभोलि हर्ट अट्याक कम उमेरका मानिसलाई पनि हुने गरेको छ ।
तर हर्ट अट्याक किन हुन्छ ? र यसको असर के हो भन्ने बारेमा आज पनि मानिस जानकार छैनन् ।
हम्रो शरीरमा मटुको काम भनेको अक्सीजन, पोषक तत्व तथा रगतलाई पम्प गरेर शरीरको दोस्रो भागमा पु-याउने हो । तर बढ्दो उमेरका साथ साथ या खराब खानपान र जीवन शैलीका कारण मुटुमा पुग्ने रक्त प्रवाहरमा रूकावट हुन्छ जसका कारण हर्ट अट्याक कारण बन्छ ।
जब हाम्रो शरीर को धमनिमामा रुवावट हुन्छ तव शरीरमा रक्त प्रवाह सुचार हुन सक्दै जसका कारण कायौं पटक हर्ट अट्याक हुन सक्छ । धमनिमा विभिन्न पदार्थहरु जम्मा हुन जाँदा रक्त सञ्चारमा रोकावट हुन्छ । जसका कारण दौडिदा मुटु धेरै धड्कन्छ वा पम्प गर्छ तर रक्तनलिमा रुकावट आउदा आवश्यकता अनुसारको रक्त प्रवाह हुन सक्दैन र हर्ट अट्याक हुन जान्छ ।
हर्ट अट्याकको पीडा झेल्नु मुटुको मजबूतीमा निर्भर हुन्छ । यही कारण जवानहरुले हर्ट अट्याकको पीडालाई सामान्य रुपमा झेल्ने गरेका छन् । यो पीडा केही क्षण मात्र हुन्छ भने कही अवस्थामा भने यो कयौं घण्टा सम्म पनि हुने गरेको छ । यस्तो स्थिति मा तुरुन्त डाक्टरसँग जाँच गराउन आवश्यक छ ताकि समय रहदै यसमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
हार्ट अट्याकको खतरा कम गर्नका लागि जरुरी छ खानपानमा नियन्त्रण, तथा जीवनशैलीमा परिवर्तन । यसका लागि धेरै मसलेदार खानमा नियन्त्रण आवश्यक छ । त्यस्तै नियमित रुपमा फलफुल, सलाद, हरियो साग सव्जीको प्रयोग आवश्यक छ । त्यस्तै नियमित रुपमा योग तथा व्यायाम जरुरी छ ।
प्राण बचाउने सिटी रिक्साको कथा
मन्थलीको गेलुमा खानेपानीको चरम समस्या, मुहानै दुस्ति भएको स्थानीयको आरोप
अन्यायको पिडामा पुर्व जनसेना कमान्डर, निर्दाेष हुँदाहुँदै ५ वर्षदेखि जेलमा
बालुवाटारमा, जमकट्टेल झन्डावाल गाडीमा, मजदुर भोकै सडकमा